Nkọwa nke nkà na ụzụ na usoro nke ise anwụrụ - Azụ - 2020
Iji mee ka ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị nwee azụ na-atọ ụtọ, ị ga-amụta azụ na-ese siga ma gbalịa ịṅụ sịga na-amasị gị onwe gị. Usoro nke ise siga adịghị njọ dịka ọ ga-eyi ka ọ na-ele ya anya. Isiokwu a na-enye nkọwa gbasara otu esi aṅụ anwụrụ na ụlọ na ụdị osisi ndị a maka ịhọrọ.
Mkpụrụ osisi dị mma
Azụ a kwụsịrị
Usoro ntanetị na ịṅụ sịga
Ọ na-esi ísì ọkụ
Igwe na-acha anwụrụ ọkụ
Nhọrọ osisi maka ise siga
Ụdị osisi dị iche iche na-enye ihe dị iche iche na-atọ ụtọ. A ghaghị iburu nke a n'uche mgbe ị na-akwadebe maka ise siga.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na azụ na-ese anwụrụ nwere ndo na-acha ọkụ, nke a nwere ike igosi na ọ dara ogbenye ma ọ bụ njọ. Iri ụdị ngwaahịa a dị ize ndụ na ahụ ike.
A na-ewere okenye na osisi junipa ka osisi kachasị mma maka ịṅụ sịga, ọbụna alaka ole na ole nke osisi ndị a ga-enye azụ a na-ese anwụrụ agba aja aja na ihe ísì ụtọ pụrụ iche. Ọkụ siri ike na Juniper siri ike inweta maka iji ụlọ mee ihe, ebe osisi dị obere ma na-etolite karịsịa na mpaghara ugwu.
N'okpuru ise siga, osisi nke osisi di iche iche dika Beech (ga-enye azụ a na-ese anwụrụ ọkụ na-acha aja aja), akpu (na-enye ụfụ na-esi ísì ụtọ), maple (na-enye azụ azụ anụ), uyi (ekpokọtara ọgaranya), hazel (ntakịrị ekpomeekpo ọjọọ), na mkpụrụ osisi: cherry (ọma flavored), osisi apple (na-enye azụ a ụtọ uto), plum, ube (nye uto uto nke ngwaahịa a gwụrụ) na rowan (na-enye ekpri ekpri ekpri).
Ụfọdụ ndị na-ese anwụrụ na-eji birch, ma ọ na-enye azụ a na-esi ísì ísì dị iche iche nke na-enwe mmasị n'òtù ndị amateurs. Ọtụtụ ndị na-amasị azụ na-ezighị ezi n'ụlọ na mgbakwunye nke alaka na akwukwo mkpụrụ vaịn, eucalyptus, blackberry ma ọ bụ currant, ma iji ụdị ihe ọkụkụ ndị dị otú ahụ enye ntakịrị uto. Àgwà ndị na-adọrọ adọrọ nke gụchara ọka na-adabere na osisi ahọrọ, nke ọ ga-aṅụ sịga.
Mkpuru osisi na-adighi mma maka ise siga, n'ihi na o nwere otutu ugbo, nke ga-enye ogbe azu dika uto ilu, ma ozo, o ga-ekpuchi ulo anwuru anwuru nke nwere akwa ozo. Maka nkwadebe nke anwụrụ ọkụ na-ese anwụrụ ọkụ, ọ ga-ekwe omume iji ụdị osisi dị iche iche, ọ bụghị otu ụdị.
Ọ bụ ihe na-achọsi ike iji mkpụrụ osisi ihe na-erughị 60% mgbe ị jikọtara ngwakọta nke ụdị osisi dị iche iche. Iji osisi akọrọ eme ihe ga-enye uto na-adọrọ adọrọ na azụ a gwụrụ azụ na sheen ọlaedo. Osisi na-agba mmiri ga-enye azụ a na-egbukepụ egbuke egbuke na flavor savory. Tupu e jiri ya mee ihe, a na-ewepụ ogbugbo site na osisi na alaka, ọ nwere ike ịnwe resin, nke, mgbe ọkụ, ga-edozi azụ na mgbidi nke ọkụ ọkụ.
Mgbe ahụ, a na-agbaji osisi ahụ na kichis na ibe dị ogologo 20-30 mm n'ogologo, ụdị ihe anwụrụ ọkụ a ga-enye ọkụ na-adabara adaba na okpomọkụ kachasị mma.
Ị ma? E kwesịghị ịchekwa azu ọkụ na-ekpo ọkụ maka ihe karịrị ụbọchị atọ.
Iji na-ese anwụrụ ọkụ n'ụlọ, ịkwesịrị itinye ya na ebe a na-ese anwụrụ maka oge ụfọdụ. Anwụrụ ọkụ bụ antiseptik nke na-eme ka ndụ dị elu nke ngwaahịa, ọ na-enyekwa ha uto pụrụ iche na isi ísì. Osisi osisi dị iche iche nke osisi dị iche iche n'oge a na-enwupụta ọkụ na-abụ isi iyi nke anwụrụ ọkụ dị otú ahụ. Azụ anwụrụ ọkụ n'ụlọ na-adị mfe n'ụlọ smokehouse, nke ị nwere ike ịzụta ma ọ bụ mee onwe gị.
Ụdị ọ bụla dị mma maka ịṅụ anwụrụ, ma salmon, trout, tuna, nkume dị iche iche, sturgọn, carp, perch, tench, pike perch, cod, carp, carke, horse mackerel, beluga, roach, roach na eel. Ọ bụrụ na ị kpebie ịṅụ anwụrụ n'ụlọ, ị ga - ahọrọ ụdị osimiri ma ọ bụ onye bi n'ime mmiri dị ka ihe ị chọrọ, nyere na n'ime azụ ụfọdụ, ọkpụkpụ azụ ahụ ga - etinye ihe isi ike n'oge nhazi.
Mgbe a na-ese anwụrụ, ọtụtụ abụba abụba na-anọgide na-atọ ụtọ, abụba abụba si na ha pụta. Nri ọhụrụ dị mkpa maka ise siga, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhọrọ ndị mmadụ n'otu nha maka nri dị elu.
N'ịkọwa azụ ahụ, a kwadebere ya maka ise siga, saa ya na ịhazi ya. A na-ejikarị obere ndị na-aṅụ ihe ruru 0.7 n'arọ, enweghị gutting na wepụ akpịrịkpa; ndi mmadu di iche iche si na 0.7 ruo 3 n'arọ gutting at will, ọ ka mma ịhapụ mgbịrịgwụ iji chebe ngwaahịa ahụ site na nchịkọta ahụ; a na-ekpochapụ mmadụ dị iche iche site na n'arọ 3 n'ogologo ya, ya bụ, nnukwu ntù, isi, na isi.
Mgbe ọgwụgwọ mbụ, a na-asa azụ a, ọbọp na akwa akwa iji wepụ mmiri mmiri, mgbe ahụ, a na-eji nnu gwọọ onye nke ọ bụla na-etinye aka na nkedo maka awa 2-3. Tupu na-ese azụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'ụlọ, a na-eme ya ka ọ dị n 'ụlọ okpomọkụ na salted n'okpuru akwụkwọ akụkọ ruo awa 24. Mgbe a na-asa azụ ahụ, a na-asacha nchicha nnu ma jiri akwa nhicha ya.
Ọ dị mkpa! Maka ịṅụ anwụrụ, anaghị eji osisi rere ure na ero, ebe ọ bụ na ọkụ nwere ike imepụta ihe ndị na-emerụ ụmụ mmadụ.
Nkà na ụzụ nke ịkụ anwụrụ na azụ na-enye gị ohere inweta ezigbo utịp site na ngwa mbụ ahụ. N'ihu igwe anwụrụ ọkụ, usoro a agaghị esiri gị ike na-egbu egbu, ị ga-enwekwa mma magburu onwe ya. Dabere na usoro nkwadebe, ụdị ịṅụ sịga dị iche iche dị iche: ọkụ, oyi na ọkara ọkụ. Anyị ga-amata onye ọ bụla n'ime ha.
Usoro anwụrụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-edozi ngwaahịa ahụ na-ese anwụrụ ọkụ na okpomọkụ nke + 50 + 60 degrees. A na-ehicha efere maka awa 12-18, dabere na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ n'otu n'otu, mgbe ahụ, a ga-asacha nnu. Maka ịṅụ sịga, jiri stovu ahụ "stovu", a na-ahapụ azụ ahụ ka ọ na-ejikọta anwụrụ ọkụ na ikuku ruo awa iri na abụọ. Nri nke azụ a na-ejupụta n'ọkara nke mbụ bụ nke mbụ, nke nwere àgwà dịtụ iche na-ese siga na-ekpo ọkụ.
Ụzọ dị otú a chọrọ ahụmịkpe a chịkọtara iji nọgide na-enwe okpomọkụ ma họrọ oge kacha mma ịṅụ sịga. Usoro a dị mgbagwoju anya na egbu, ọ bụghị ọtụtụ n'ime ndị na-akwado ya. Mgbe ahụmahụ mbụ na-enweghị mmeri, onye na-ese anwụrụ na - ahọrọ ụzọ ọzọ iji dozie azụ ahụ.
Na usoro oyi, azụ a na-enweta nsị anwụrụ ọkụ na okpomọkụ nke + ogo 16 + 40, ọ na-ewe ogologo oge, na-emekarị ruo ụbọchị 3-4. Ụdị anwụrụ ọkụ na-achọ nnukwu ụlọ anwụrụ ọkụ na-ekpo ọkụ nke ogologo 7-10 mita. Owuwu ulo a na-eburu ebe buru oke ibu, ya mere, o gaghi adi ndi nwe obere ebe.
Usoro ịṅụ sịga bụ ịkwado azụ na ọkụ na-ere ọkụ ma jupụta igbe mkpuchi ya na sawdust na ibe, yana ntinye na ịnọgide na-anọ na paradaịs. A na-echekwa azụ na-acha uhie uhie na friji maka ọnwa atọ.
Azụ a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'ụlọ na-enye maka nhazi na anwụrụ ọkụ na okpomọkụ nke + 65 + 85 degrees maka awa 2-4. N'ime oge a, ala nke ngwaahịa ahụ akpọnwụwo, nweta agba aja aja na-enwu, ísì na uto nke azụ na-abụ kpọmkwem.
Ị ma? Nnukwu azụ dị nnu chọrọ ka ọkụ na-ese siga.
Maka ịṅụ sịga na-ekpo ọkụ, a na-ekpuchi ala ụlọ anwụrụ ọkụ na sawdust na ibe ya na oyi akwa nke 15-20 mm, azụ ndị ahụ anaghị adabara na grate maka ikuku nke ikuku na anwụrụ ọkụ. Okpomọkụ na-ekpochipuchi anya iji zere anwụrụ ọkụ na ikuku oxygen si sawdust, n'ihi na ise siga na-acha ọkụ, ọ bụghị ọkụ ọkụ. A na-eme ọkụ n'okpuru ụlọ anwụrụ ọkụ;
Ndị na-azụ azụ na-enwe mmasị na ya otu esi agba anwuru mmiri. Ihe dị iche iche nke osimiri azu na-ada na ísì ísì ya, nke a ga-akwụsị site na salting n'okpuru nrụgide n'ime ụbọchị atọ. Mgbe salting, a na-asa azụ a, a mịrị amị ma na-ese anwụrụ maka 40-50 nkeji na okpomọkụ anaghị eru ogo 70. Azụ a zuru oke dika nri biya.
Ịṅụ sịga na-akwụ ụgwọ na-enye gị ohere ịhazi usoro a n'ụlọ. Na obere mgbalị, ị nwere ike ịnụ ụtọ nri azu, nke a na-apụghị iji tụnyere ngwaahịa mmepụta ihe.
Fancy dwarf tree with leaves fresh bright - ficus "Benjamina Natasha"
Ọgwụgwọ nke oviduct mbufụt ke ọkụkọ